Outdoor Pool Furniture Swing Pool Chair Pool Table, wholesale Outdoor Furniture on TopChinaSupplier.com
Mbido ulo ngwá ụlọ Ngwongwo n'èzí Mpụga Ọdọ Mmiri Outlọ Mpụga Pool oche
Mpụga Ọdọ Mmiri Outlọ Mpụga Pool oche
10 È US $ 360.00 / Set
Maka oche mara mma ụgbụ ụgbụ oge ezumike ị gaghị echere ịla n'ụlọ, lee anya karịa arịa ndị ọzọ. Ya na ndi ohuruntemporary styling, your living room will never have looked so good. With this comfortable sofa at home, your onsogbu nly nwere ike ọ gaghị achọ ịhapụ ya!
Product Name Ogige Ugbo a na-akpọ Ogige iolọ Ngapụta Roi na Roi na oche oche
Yledị oche Tebụl kọfị nwere oche model Number TF-2501
Agba Selectable Akwụkwọ SGS kwadoro
ihe onwunwe Fgwè frame (1.2+1.5 mm) net Weight Single oche (7.5kg)
Olefin rope 6mm Tebụl Kọfị (27kg)
Igwe siri ike nke mmadụ (14mm)
Size (L * W * H) ka picture CBM 0.52 m³
QTY / 20GP 52 tent QTY / 40HQ 130 tent
Ejiri akwa agba:
Ejiri eriri agba:
A. Wicker na agba
A na-eji arịa kacha mma nke kachasị mma na -emepụta arịa. Ihe omuma a di otutu nwere otutu uru, tinyere odidi okike, iguzogide akwa, inogide, iguzogide UV na mmegide ihu igwe. Wicker anyị bụkwa environmentally friendly, na-mere si recyclable na-abụghị na-egbu egbu ihe. Enwere ike ịhapụ arịa ụlọ kpara n'èzí n'afọ niile. Ọ bụ ngwakọta nke ọmarịcha aka ejiri aka ya na imepụta ejiji. Kindsdị rattans niile dị: ewepụghị, ọkara ọnwa na gburugburu. Ha bụ SGS nwalere ma anyị na-enye ụdị agba dị iche iche maka ịhọrọ nke ha.
B. Fabric - Cushion Colours:
Ngwongwo a na-eji eme akwa bụ 100% ihe ngwọta e ji esiji ákwà mmiri, ha bụ ndị na-asọ oyi na mmiri, na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ọgwụ na agba. A na-ewu ụlọ anyị maka nkasi obi na arụmọrụ n'èzí. Ha jupụtara na ụfụfụ urethane na-eguzogide ọgwụ ma ọ bụ jiri eriri polyester fụchie. Ihe onyogho ndị egosiri na katalọgụ a na-egosi naanị. Ọ bụrụ na e nwere incoọdịiche dị n'etiti ihe oyiyi na ngwaahịa ahụ n'ezie ngwaahịa ga-achịkwa.
C. frame - Aluminom:
Ngwaahịa anyị niile bụ coedoziri ya na eriri 1.2, 1.5 na 1.8mm, nke na-eme ka o sie ike iji gbochie ibu na nrụgide. Anyị na-eme ka ọ dị ntụ ntụ ntekwasa ka fa na-echebe rame n'ụzọ zuru ezu megide nrụrụ aka ma bụrụ ihe a na-apụghị ịhụ anya oma ọ bụ na ọ kpara mgbe ụfọdụ ndị na-eweta ngwaahịa anaghị eme nke ahụ iji belata ọnụahịa. Ihe mkpuchi ntụ ntụ nwekwara uru nke sie ike, sie ike, nchara na-eguzogide ọgwụ na ịdị arọ.
A: T / T (Ekwentị Nyefee)
Q2: Olee mgbe a ga-ebubata ngwongwo mgbe edobere ya?
Na-adabere ngwaahịa gị ahaziri iche, ọ nwere ike ịbụ ụbọchị iri ruo ụbọchị iri atọ,
Ngwaahịa nkịtị, anyị nwere ike ibuga na odị ka anyị nwere ngwaahịa, ọtụtụ n'ime ihe anyị nwere ike ibuga na ụbọchị ọrụ ụbọchị 15-20! a ga-akọwapụta oge nnabata ahụ kpọmkwem na akwụkwọ ọnụahịa proforma once oda bu // conike / i / ied.
Q3: Ogologo oge ole tupu ndị ahịa enweta ego?
Na mgbakwunye mmepụta oge mentiodị elu karịa, ọ na - ewe ụbọchị 10-25 kacha elu maka ibupu n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla gburugburu ụwa. ọ dabere na ọdụ ụgbọ mmiri gị anyị ga-ahọrọ ụzọ mbupu ọsọ ọsọ maka gị iji jide n'aka na ị ga-eburu ngwongwo n'oge!
Q4: Egosiri ihe ndị dị na webụsaịtị njikere inyefe mgbe edobere ya?
Otutu n’ime ihe achoro ka emee once oda bu // conihe siri ike / i / ied.Stock nwere ike ịdị n'ihi oge dị iche iche, biko cozuo ndị ọrụ anyị maka ozi zuru ezu.
Q5: Kedụ ka m ga-esi kwuo okwu ma kwuo ihe?
mpịachi tebụl ọdọ mmiri